UZuma usolwa ngokuthunaza isithunzi sezwe ebuyisa uGordhan phesheya | isiZulu
UZuma usolwa ngokuthunaza isithunzi sezwe ebuyisa uGordhan phesheya
Johannesburg – UMengameli Jacob Zuma usethole okukhulu ukugxekwa ngokuthunaza isithunzi sezwe kulandela ukukhipha umyalelo wokuthi uNgqongqoshe wezezeMali, uPravin Gordhan, anqamule uhambo lwakhe oluwuchungechunge eLondon kanye naseMelika nalapho ebeyoheha khona abatshali bezimali.
Lokhu kuholele ekutheni irandi lakuleli lehlelwe ngamandla ngemuva nje kokuthi uZuma, eyalele uGordhan ukuthi akabuyele ekhaya ngemuva kosuku ehambile ngenhloso yokubamba imihlangano ebizothatha isonto. IHhovisi likaMengameli alizange linikeze sizathu ngokunqamula lolu hambo.
Iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), nalo lithi alazi lutho ngokuyisona sizathu esiholele ekutheni kubuyiswe uNgqongqoshe isigubhukane phesheya kwezilwandle.
OLUNYE UDABA: Akuxoshwe uPravin Gordhan - ANCYL
“Ngokusobala izimakethe zizokutolika kambi kakhulu lokhu ngaphandle uma sikwazi ukuchaza ngendlela egculisayo, nengikholwa ukuthi kunzima khona, [ukuthi] kungani lolu hambo oluwuchungechunge lunqanyuliwe,” kusho uMartin Kingston, oyiChief Executive Officer yakwa-South Africa of NM Rothschild & Sons.
Sekunezinyanga kulokhu kunokuqagula kokuthi uGordhan usengcupheni yokuxoshwa uMengameli Zuma njengoba kubikwa ukuthi banokungaboni ngaso linye ngokuphathwa kwezinkampani zikahulumeni phakathi kwezinye zezinto.
OyiChief Executive Officer ePeregrine Holdings, uJonathan Hertz, uthi uma ngabe kuxoshwa uGordhan kanye nesekela lakhe, uMcebisi Jonas, likhulu itwetwe elizoba khona ezimakethe, nokuzoba nomthelela omubi kakhulu nasemandleni erandi.
Abe-Business Leadership South Africa bathi umonakalo odaleke ezweni ngenxa yalesi sinqumo sikaZuma “akufanele uthathwe kancane”.
UProfessor wase-University of Witwatersrand, uSusan Booysen, uthi lokhu kuzokwenza ukuthi kukhule ukungahoshelani phakathi kukaGordhan kanye noZuma.